Ividiyo: Blogs in Plain English | Martech Zone
Ividiyo: Blogs in Plain English
NgoLwesithathu, uDisemba 19, 2007 NgoLwesihlanu, January 6, 2017 Douglas Karr
Enye ividiyo enhle evela ku- Ubuciko obuvamile itholwe nge-blog ka-Ade:
Okunye ukugxeka okwakhayo, kepha… le vidiyo isiphuthele ngempela isikebhe kubuchwepheshe Ngemuva ukubhuloga - izinto ezinjenge-pings, trackbacks kanye ne-search engine optimization.
Ukubhuloga yi-High Octane Fuel yeNjini Yokusesha
Lokho ividiyo engakhulumi ngakho kungamandla okubhuloga ekusheshiseni izihloko kwimiphumela yenjini yokusesha. Lapho abantu bebhala ngokwengeziwe ngeposi lakho le-blog, uthola izilaleli eziningi. Lapho ufinyelela izithameli eziningi, inqanaba lakho lenjini yokusesha lingcono. Uma imiphumela yenjini yakho yokusesha ingcono, uthola izithameli eziningi ngokusesha.
I-Google ifuna ukubeka izixhumanisi ezithandwayo, zekhwalithi kuqala lapho zikhomba amagama angukhiye nokuqukethwe. Lapho unayo yonke i-blogosphere ebhala ngawe - ithuthukisa okuqukethwe kwakho kuze kufike phambili kolayini. Ngomqondo othile, ukubhuloga kungukudla kokondla injini yokusesha.
Kungani uneBhulogi? Kungani ungasebenzisi iSocial Network?
Abanye abantu badida amasu futhi bazibuze, “Kungani ungakhi yonke inethiwekhi yokuxhumana nabantu? Uma ukubhuloga kukuhle emiphumeleni ye-Search Engine - ama-Social Networks kumele abe yinto emangalisayo! ”
Qaphela ukuthi umbono ubaluleke kanjani kubhulogi, ama-blogger anezinqondo, kanye nabafundi bawo (ohlangothini lwesobunxele lweshadi). Lo ngumkhonto ogxilile ohlose isikhungo esifile esihlokweni esifunwa ngumseshi. Amanethiwekhi wokuxhumana nabantu anemibono ethile - kanti abanye banokubhuloga kwangaphakathi (okusebenza njengebhulogi ejwayelekile), kepha ingxenye enkulu yamaNethiwekhi Omphakathi ikhona ukuthola njengabantu, hhayi ukugxila okumaphakathi kumqondo othile.
Ukuxhumana nabantu kumnandi - ngingowabaningi. Kepha abanakho ukugxila kwezihloko namagama asemqoka i-blog engaba nawo ekukhuleni kwezinjini zokusesha. Amabhulogi ayindlela esheshayo yokwenza umbono wakho noma izihloko zizwakale. Ukuxhumana nabantu kuhle ukuhlangana futhi uthole abantu abafana nawe.
Tags: blogamabhulogi ngesiNgisi esicacileAmavidiyo Wokumakethayini ibhulogi
Dec 19, 2007 ku-9: 18 AM
@Douglas “Abanye abantu badida amasu futhi bazibuze, kungani ungakhi inethiwekhi yokuxhumana nabantu bonke? Uma ukubhuloga kukuhle emiphumeleni ye-Search Engine - ama-Social Networks kumele abe yinto emangalisayo! ”
Angizange ngilandele lowo mqondo nhlobo. Ngivumelana nombono wakho wokuthi amabhulogi namanethiwekhi okuxhumana nabantu aneziphakamiso zenani elihlukile nokuthi ukuxhumana nomphakathi akulungele i-SEO yamatopics imigqa phakathi kwalokhu okubili. Angikaze ngizwe noma ngubani esho into enjalo…
Dec 19, 2007 ku-9: 47 AM
Lapho sikhuluma namanye amaklayenti maqondana nezinzuzo zokubhuloga, ezinye izinkampani (hhayi iningi) zibuyisela emuva ukuthi zingathanda ukwakha inethiwekhi yokuxhumana nabantu. Njengoba amanye amanethiwekhi wokuxhumana nabantu efaka ukubhuloga, bacabanga ukuthi lokhu empeleni kuyisinyathelo sokukhuphuka.
Amasu ngemuva ngakunye ahlukile, kanye nezithameli nezizathu zokuba lapho.
Iqiniso ukuthi izinkampani zisadidekile ngalobu buchwepheshe futhi empeleni aziqondi umehluko. Ngiyethemba angibaphambanisanga ngaphezulu!
Dec 19, 2007 ku-10: 02 AM
Ah, ngiyabona ukuthi uvelaphi manje. Ubukhuluma ngalelo thuba eliphelele le-neophyte namakhasimende ukuthi “Izwe le bhande le thang entsha ebizwa nge- "inner-net" futhi ufuna ukungitholela isiqeshana sokwenza lokho ngoba ngikwenzile wezwa ukuthi ungateleka-ucebe lapho. Kusho njalo kumabonakude”Hhayi ngalabo abalalelayo empeleni!
(Uxolo uma ngiwele ngokweqile lapho ekwenziweni kwesimo… 🙂
(PS Kuthiwani ngokungeza i-plugin yokubuka kuqala ukuphawula kulokhu ol'blog? Ngizwa kuthiwa i-blogger ethile ikhombe uhlu lwama-plugins angama-30 aphezulu kwenye indawo. Ngizobheja ukuthi ungayithola eyodwa kulolo hlu… '-)
Dec 19, 2007 ku-10: 22 AM
Nansi enye yezindlela engibonisa ngayo umehluko phakathi kokuqhafaza kwebhizinisi le-Search vs i-Social Network for Business.
Ngokwengxenye enkulu abantu abafuni ukubhalisela ibhulogi yebhizinisi lakho futhi abafuni ukujoyina inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu. Izinhlangano ezicabanga ukuthi isu lokuthi “yakha futhi bazokuza” kufanele nje zisungule iqembu ku-Facebook, uzoba namathuba aphezulu kakhulu okuphumelela kunokuzama ukwenza into yakho "Yakho" ibe yindawo abantu abazobuyela kuyo.
Lapho ucabanga nge-Corporate Blogging, kufanele ucabange ngeqiniso lokuthi abantu bazofika kanye kuphela… .basesha futhi umsebenzi wakho ukuma phambi kwabo lapho befika ekhasini lemiphumela.
Leli inani eliphakeme kakhulu lokubhuloga ezinkampani
Dec 19, 2007 ngo-12: 27 PM
Lowo ngumbono wokuthi 'wonke amakhasi ayikhasi lokufika' futhi ngiyavuma nge-100%. Kodwa-ke, ngaphandle kokuthi noma ngubani ayikhombise, awukuqinisekisi ukubekwa kwakho futhi uzovumela abanye ukuthi bakudlule kalula - bakududulele imiphumela. Umfutho negunya yizinto ezibalulekile ezinikeza amandla okuhlala.